प्रधानमन्त्रीमाथि डा. भट्टराईको कटाक्ष : सरकार ढाल्न खोज्ने राजदूतलाई किन देश निकाला नगरेको ? | जनदिशा
प्रधानमन्त्रीमाथि डा. भट्टराईको कटाक्ष : सरकार ढाल्न खोज्ने राजदूतलाई किन देश निकाला नगरेको ?
Last Updated on June 30, 2020 at 4:25 pm
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाएका छन् । उनले हावामा मुक्का चलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगारेको दावी गरे ।
मंगलबार जनता समाजवादी पार्टीले नागरिकता विधेयकको विरोधमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले भारत, अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाए ।
विदेशी राजदूतले सरकार ढाल्न खोजेको प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति उनले कटाक्ष गरे । प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘सरकार ढाल्न खोज्ने राजदूतलाई देश निकाला किन नगरेको ?’
“प्रधानमन्त्रीजी कुनै देशको राजदूतले मलाई षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ। त्यसो हो भने उहाँ के हेरेर बस्नु भएको छ ? राजदूतलाई बोलाएर किन स्पष्टिकरण लिनु हुन्न ? राजदूतलाई तुरून्त देश निकाला किन गर्नु हुन्न?’, भट्टराईले प्रश्न गरे ।
भट्टराईले नागरिकता विधेयक विभेदकारी भन्दै विरोध गरे । उनले अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्थामा महिला र पुरूषलाई समान अधिकार दिइनु पर्ने माग गरे ।
Previous Previous post: ओलीलाई प्रचण्डको प्रश्न : सरकार ढाल्न दूतावासले चलखेल गरेको भन्ने आरोपको प्रमाण के ?
Next Next post: कोरोना अपडेट : मंगलबार ३१६ संक्रमित थपिए, ६० जना डिस्चार्ज